• Hadii waxa warbaahinta iyo barraha bulshada ka socdaa ay beenyihiin maxaad noogu cadayn wayday oo aad u aamusteen addiga iyo xukuummadaadu?
• Maxaad uga hadli waydeen dhulka ay dadka danyarta ahi leeyihiin qoyska madaxwaynaha ayaa nagu haysta, maxay qoykaagu isu difaaci wayeen ama xukuummadu dhaliisha isaga difaaci wayday maxaa jirra?
• Waa markii ugu horaysay ee aan maqlo garsoore maxakmadeed oo ka tagay shaqadii garsoorka isagoo leh cadaaladi ma jirto.
• Waa markii ugu horaysay ee aan arko Qarreen xuququl insaan oo ka tagey shaqadii Qarreenimo isagoo leh cadaaladi ma jirto.
• Colllaada ka jirta Ceel-afwayn waxay bar madoow ku tahay somaliland,waaxayna ceeb ku tahay qaranka balse waa qadar rabi waxii dhacayaa.
• Madaxwayne xukumadaadu waa fadhiid , dadka kugu xeerani ma ah dadkii maanta dalkan marxaladaas addag ka saari lahaa, mana aha dadkii ku haboonaa siyaasadda maanta wadanka ka jirta, waxaanse la yaabyay in aanu xukumadaada ku jirin xubno kaa difaaci kara dhaliisha ugu timaada mucaaradka. Waxaa lagugu xantaa inaad isku xeertay dad aan arragti lahayn oo dood lahayn oo damac lahayn , dad aan weedh kugu soo celinayn kuwaasi waxba kuma soo kordhinyaan ninka raggi wakii kula dooda ku khilaafa ee tallada kulla hojiya. Waxaan kusoo jeedin lahaa wakhtiga ku hadhay ha dayicin ee waxuun ka badal xukuumadaadda oo “jabbad-kan dulinku galay ee wadda qaniinka ah ka dhex kac.